သာလွန်ဇောင်းထက်| February 11, 2013 | Hits:12,097
နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်ရန် MSF သတိပေးခံရ၂၀၁၅ တွင် ပြည်သူများ ဆန္ဒမဲ ပေးလိုသော နိုင်ငံရေး ပါတီစစ်တမ်း ကြံ့ခိုင်ရေး ကောက်ခံတတိယတန်းစား ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၂)စကော့တလန်က သင်ခန်းစာ
tetnay February 11, 2013 - 3:01 pm အခြားအတိုက်အခံပါတီက ၁ ယောက်တည်း၊ ၁ဦးတည်းသော ဒုဝန်ကြီး ပဲရှိပါတယ်၊
Reply minko February 11, 2013 - 3:12 pm နောက်ကွယ်က ဘာအကြံအစီ ရှိသလဲ-တကယ့်ကို ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြစ်ထွန်းစေချင်တဲ့စေတနာလား ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ တော့လိုတယ်- ၂၀၁၅ မှာ ကြံ့ ဖွတ် ကို အပြင်းအထန် မကန့် ကွက်အောင် ကြိုတင်ပြီး မဟာမိတ်သဘောမျိုး လုပ်ဆောင်ခြင်းလား- တိုင်းပြည်အပေါ်တကယ့်ကို ရိုးရိုးသားသား စေတနာထားရင် အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေ ကို ပြုပြင်ဘို့သို့မဟုတ် အသစ်ရေးဆွဲဘို့ လုပ်ဆောင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘဲ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဟာ တဖက်သတ် စိတ်ကြိုက် ရေးဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Reply Win Myint February 11, 2013 - 5:29 pm အခြားအတိုက်အခံပါတီက ၁ ယောက်တည်း၊ ကို ဒုဝန်ကြီးပေးပြီး၊
Reply လူလေး February 11, 2013 - 9:42 pm that is good news anyway. i hope there will be many good news for us.
Reply ပါကြီးဖိုး February 11, 2013 - 10:58 pm ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်နေရာ ခန့်အပ်ပါက ကြိုဆိုသင့်ပါတယ်။ သို့သော် သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရအောင် ဟန့်တားထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ဘဲထားကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဝန်ကြီးရာထူးဖြင့် နှစ်သိမ့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ မဖြစ်သင့်ပါ။
Reply Lulay February 12, 2013 - 7:00 am Forbidden people from forbidden jungle palace. The way the are walking makes me sick. I am throwing up. They just look crooks and witch-crafts about to consume human bodies.
Reply pps12345 February 14, 2013 - 11:45 am တရုတ် ကို မှီရန် နည်းနည်း နီးစပ်လာပြီ။ တရုတ်ပြည်မှာ မော်စီတုံး လက်ထက် က ဒုသမ္မတ တစ်ယောက်ကို အခြားပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ အခြားပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို ဝန်ကြီး အဆင့် ပဲ ပေးတော့တာ တွေ့ရပါတယ်။
Reply မင်းကြီးညို February 17, 2013 - 10:23 pm ဒါဟာ အတိုက်အခံပါတီတွေကို ကျေနပ်အောင် ချွေးသိပ်ပေးတဲ့သဘောပါ။ အဲဒါလဲကောင်းပါ
Reply Win Myint February 19, 2013 - 4:21 pm ပါတီစုံအစိုးရအဖွဲ့ပုံစံ အသွင်ပြောင့်းခြင်းမပာုတ်ပါ.